Indlu encinci ngasehlathini
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTurid
Ifakwe kwigadi epholileyo, ejikelezwe ngamasimi, amahlathi kunye nezakhiwo ezithe saa, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla. Indawo inokuba yindawo yokuqala yokuhlala esebenzayo. Yindlela emfutshane (3km) eya kwizinto ezininzi, ivenkile yokutya, izithuthi, njl.
Indlu incinci kodwa inayo yonke into oyifunayo. Ikhitshi elikhulu nelipholileyo, igumbi lokulala eliphindwe kabini, elikhulu, igumbi lokuhlambela elithandekayo kunye negumbi elincinci leTV. Endlini, umniniyo naye unendawo enkulu yokusebenzela, leyo ngokuqinisekileyo ayisetyenziswa xa kuqeshwa indlu.
Indawo ibekwe kakuhle kuzo zombini iindawo zokuhlala ezolileyo okanye ezisebenzayo. Igadi eneentyantyambo zayo zonke yindawo yazo zonke iimvakalelo kwaye kukho indawo yokuhamba entle ngaphandle komnyango. Uya kufumana neendlela zebhayisekile, iindlela zokukhwela kwikwari endala, ulwandle, ibala legalufa, idama lokuqubha elikhulu elitsha phakathi kweekhilomitha ezimbalwa.
4.88 · Izimvo eziyi-180
Le ndawo imi kumqolo ophakamileyo ngaphezulu kweDrammensfjord. Indawo entle yokunyuka intaba eneendlela zokuhamba intaba kuwo onke amacala kunye namathuba abo bahamba ngebhayisekile ngaphandle kwendlela okanye ukukhwela amatye. Le ndlu ikwindawo eyayisakuba yindlwana, ngoku iyinxalenye yonyaka wonke. Kusenokubakho ingxolo "eqhelekileyo", kodwa ixesha elininzi yingoma yeentaka elawulayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Turid
Ngexesha lasehlotyeni, ndihlala kwenye indlu kwipropati, kwaye ndifumaneka xa kuyimfuneko.
Yonke imihla ndisebenza egadini kwaye ndiluncedo ngeengcebiso kunye neengcebiso malunga nokuba yintoni enomdla kwindawo yendawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Røyken